Umqondiso kuyilo: yintoni na kwaye yintoni imisebenzi yayo ephambili | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 28/04/2022 15:35 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Ulwimi olubonakalayo lwenziwe luluhlu lwemiqondiso, le miqondiso yayiyilwe ngenjongo yokuthi, kunye neqela nje lezinto ezidibeneyo, lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze umyalezo ufikelele kwisigqibo esiyimpumelelo.
Le yindlela abayila ngayo into esiyaziyo njengemiqondiso. Kule posi, ndiza kukuxelela yonke into eyimfuneko kwaye ibalulekile ukuba ungene kwaye ufunde ngakumbi malunga nehlabathi lemiqondisongakumbi kuyilo lwegraphic.
Siza kukubonisa abanye abayili kunye nabayili, abazinikele ngokukodwa kuyilo lweli sebe. Kwaye siya kukuxelela ezinye iimpawu ezibalulekileyo malunga nayo.
1 Luphawu: yintoni?
1.1 Iimpawu ngokubanzi
2 Iimpawu kwiindawo ezahlukeneyo
2.3 Izikhululo zeenqwelo moya
2.5 Iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa
3 Otl Aicher kunye nemiqondiso
3.1 IiPictograms zeeOlimpiki zaseMunich zika-1972
3.1.1 Iimpawu zikaWaldi
Umthombo: Mique Studio
Imiqondiso ichazwa njengelinye lamasebe abalulekileyo enza uyilo lomzobo. Ibalulekile kuba isebenza kakhulu kwaye isebenza njengesikhokelo. Yenye yezinto ezishwankathela kakuhle ulwimi kunye neendlela ezahlukeneyo zokunxibelelana. Oko kuthetha ukuba, ngomqondiso omnye, ungathetha isivakalisi sonke ngaphandle kokusikhankanya. Yintoni enkulu? Ewe, ngenxa yolu lwakhiwo, abantu abaninzi abanengxaki yokuva banokunxibelelana kwaye bajikeleze kwindawo ethile ngaphandle kwengxaki.
Yintoni ebonakala ngathi luphawu olulula, Namhlanje luyilo olucaciswe kakuhle kakhulu kwaye lusebenza ngokuchanekileyo oluthe lwafikelela kwizandla zoyilo lwegraphic. Okwangoku kukho iimpawu ezininzi ezidibanisa olu hlobo lwesiqalelo, kodwa kuphela ezona zisisiseko zezo zichaza imiqondiso ngokupheleleyo.
Imiqondiso ineyona njongo yayo iphambili chonga kwaye aququzelele ulwimi. Ukongeza, ikwazalisekisa imfuno yokwanelisa imisebenzi esisiseko yabantu. Ziyilelwe ukuba zibe zezikhethekileyo omnye komnye, kwaye zizalisekise iinjongo ezahlukeneyo ezithi, ngokucacileyo, zonke zikhokelela kwinto enye, umyalezo.
Ziyilwe kunye nenqaku ngalinye kwimekobume. Umzekelo, sinokufumana uphawu oludumileyo Isikhokelela kwindawo ethile yokumisa iinqwelo-mafutha okanye kwindawo yokumisa izithuthi, kwaye yenzelwe zonke iimpawu zale ndawo ukuze umntu akwazi ukuyichonga ngaphandle kwengxaki.
Ngokuqhelekileyo baqinisa umfanekiso wophawu oluthile. Iimpawu nazo zisebenza kunye neempawu, enyanisweni, imiqondiso ayiyi kuba yinto ukuba ibingaziswa nakwisazisi senkampani kwaye ngokuphambanayo. Ngamafutshane, zizinto ezidibanisa kakuhle xa udala uphawu oluthile.
Imiqondiso yenziwe ngokusuka kwimizobo efana neempawu zolwimi. Ziyilwe kwiinkqubo ezahlukeneyo zoyilo lwegraphic, kwaye nganye kwezi zinto kufuneka ziphunyezwe kakuhle kwaye zibekwe kwisiseko segridi yokwenziwa kwazo okulandelayo. Ekuboneni kokuqala kunokubonakala ngathi ngumsebenzi olula, kodwa kufuna umsebenzi omningi kunye nokugqibelela.. Kaloku, umqondiso awukwazi ukubonisa iziphene okanye ukungaboni kakuhle.
Ngamafutshane, abantu bakwanxibelelana ngemiqondiso esinceda ukuba sifumane indawo kwaye sizikhokele ngendlela ekhululekile ngakumbi. Kangangokuba, ngaphandle kwayo, besiya kuba ngabantu abapheleleyo abazifumanayo kwaye sihambahamba kwindawo enye.
Iimpawu kwiindawo ezahlukeneyo
Abantu abaninzi abaqondi ukuba zibaluleke kangakanani iimpawu ezibhedlele. Izibhedlele ngamaziko abaluleke kakhulu kuluntu, ngaphezu koko, kwayeKukwayimfuneko ukwazisa izigulane okanye abantu abafikelelayo, ukuba ukungena kwiindawo ezahlukeneyo esibhedlele akunakuvunyelwa ngenxa yokhuseleko lomntu ngamnye okhoyo. Omnye umzekelo yimiqondiso elumkisa ngemitha ethile, okanye imichiza ethi, ukuba ayiphathwa kakuhle, inokuba yityhefu okanye iimveliso ezinetyhefu kakhulu.
Ngokufutshane, imiqondiso ibaluleke kakhulu ukuba ibekho kwiindawo ezifana nezibhedlele.
Iihotele ziyafana nezibhedlele, kodwa mhlawumbi azinayo imichiza embalwa. Iimpawu ezidla ngokubonwa zimelwe kwiihotele, bakhonza ukuze umxhasi ngamaxesha onke abekwe kwaye akhokelwe ngexesha lonke lokusekwa.
Kukho iihotele ezithatha iindawo ezinkulu, eziphangaleleyo kwaye zinamagumbi amaninzi. Khawufane ucinge ukuba akukho namnye kule miqondiso ekhoyo, umntu ngamnye ebeya kuhamba elahlekile okanye ade abuyele kwindawo asele edlulile kuyo, ibiya kuba yeyona nto ikufutshane kwimayizi yase-Alice e-Wonderland.
Enye imeko apho ukusetyenziswa kweempawu kubalulekile ngokungathandabuzekiyo kwizikhululo zeenqwelomoya. Izikhululo zeenqwelomoya ziindawo apho i-amplitude inkulu kakhulu, kangangokuba zahlulwe ngemigangatho eyahlukeneyo okanye amacandelo. Kubalulekile ukuba bonke abantu ababelana ngendawo enye, ngaphaya kwenqwelomoya, bayayazi indawo abanokuya kuyo ngamaxesha onke ukuze banelise iimfuno zabo eziphambili: iindawo zokutyela, iindawo zokutyela, iinkonzo, indawo yokukhwela, njl.
Ezi zezinye zezibonelelo ekufuneka zihlale zicace kakhulu kwaye zinolwazi.
Ii-ofisi zezinye zeentlanganiso apho kudla ngokubakho imiqondiso emininzi engqonge indalo esingqongileyo. Oku kungenxa yokuba iofisi ayisekelwanga nje ekubeni yenziwe ziikhompyutha, iinombolo zemfonomfono zenkonzo yabathengi nezinye. Kodwa kwakhona kubalulekile ukwazi indlela yokuphucula umbutho wenkampani ethile.
Ukongeza, indlela yokunxibelelana ngokusetyenziswa kwemiqondisos ikwanceda abathengi bazive bekhululekile kwaye bekhuselekile, eququzelela ukuphuculwa komfanekiso wenkampani ethile.
Iindawo zokutyela kunye neendawo zokuzonwabisa
Elinye icandelo esingenako ukulishiya ngasemva lishishini leehotele. Eli candelo okwangoku lifunwa kakhulu ngabasebenzisi. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ubukho kunye nokusetyenziswa kweempawu kunceda ukuqonda ngcono kolwimi okusingqongileyo.
Ngezi zinto, abathengi baziva behambelana ngokupheleleyo besazi apho yonke into ikhoyo. Kwaye njengenkampani okanye icandelo, yonke into ibonakala icwangciswe ngakumbi kwaye ilungelelene, kuba yonke into ikwindawo yayo echanekileyo kwaye ibonisiwe.
Kukho amacandelo amaninzi afana neevenkile okanye amashishini apho ukusetyenziswa kwemiqondiso nako kubalulekile.
Otl Aicher kunye nemiqondiso
U-Otl Aicher ubengomnye wabayili bemizobo ababalaseleyo kwimbali. eweigama lakhe libhengezwa ngokubanzi ngenxa yeeprojekthi zakhe ezibaluleke kakhulu aziyilileyo kwisazisi senkampani, kodwa yayibalasele kuyilo lwemiqondiso.
Wayengekho ngaphezulu okanye ngaphantsi kunoyise weempawu kuyilo lomzobo. Uyilo lwazo lubalasele ngokucwangciswa ngokufanelekileyo kunye nokusebenza okuchanekileyo. Ukongeza, apha ngezantsi siza kukubonisa ezinye zeepictograms zakhe ezilungileyo azenzileyo kwiMidlalo yeOlimpiki.
IiPictograms zeeOlimpiki zaseMunich zika-1972
Iipictograms zeMidlalo yeOlimpiki yaseMunich ibonakaliswe ngokomelezwa ngendaleko enkulu. Kangangokuba, abazange babe yinxalenye yemidlalo nganye eyenza le midlalo, kodwa kunye namacandelo amaninzi ayenzileyo.
Ngowe-1972 iipictograms zaqalisa ukusebenza kwaza kwaveliswa ingcamango ephambili eyayiphawula ngaphambi nasemva kwimbali yemiqondiso. U-Otl Aicher, ofakwe endaweni yakhe ezinye iifom ezingabonakaliyo eziqatshelweyo kwimisebenzi yakhe, kwiimodyuli ezahlukeneyo zoyilo loyilo. Ngale ndlela, ukuhamba komntu kuphuculwe ngcono, kunye nomsebenzi wezemidlalo awenzayo. Oku kwenzeka kwiiOlimpiki zaseTokyo ngo-1964.
Kwakhona wasebenzela ezinye iiprojekthi zemiqondiso, umzekelo kwiMidlalo yeOlimpiki eMontreal, apho i-mascot edumileyo yemidlalo yenzelwe, iWaldi mascot, umzobo okwimo yenja. Kodwa yayingeyiyo yonke into eyayikho, kuba njengoko besesitshilo ngaphambili, uye wayila imiqondiso kwezinye iimpawu zenkampani athe wayila waza wazenza. Kangangokuba uyilo lwakhe lwaba lubalulekileyo kuba washiya uphawu lobuqu kubo.
Yile ndlela, kwiminyaka kamva, i-brand eyaziwayo yaseBraun yafika, i-brand eyakhiwe ngokupheleleyo kunye nesebenzayo. Ilogo edumileyo ibe yinxalenye yowona msebenzi ubalulekileyo nobalaseleyo woyilo lwegraphic. Ukongeza, ivelele ukubaluleka kokusetyenziswa kweemilo zejometri eziye zanceda ukuqinisa ngakumbi i-iconography yelogo. Ngokungathandabuzekiyo yayiyenye yeebrendi ezithi, njengazo zonke ziyilo, zibe nendaleko enkulu yexeshana. Ukongeza, uye waba yinxalenye yeeprojekthi ezininzi ezifanelekileyo kakhulu, ngaphandle kwamathandabuzo omnye wamanani woyilo obalaseleyo ngaphezu kwamanye amaninzi.
Uyilo kunye neempawu zihlala zihamba kunye. Kangangokuba bebengayi kuba nto ngaphandle komnye. Ke ngoko, kubalulekile ukuba xa uyila uphawu uthathele ingqalelo ipesenti encinci yeempawu kuyilo lwakho. Ewe, kuya kukunceda ulungelelanise ngcono eminye imiba yesibini kuphuhliso lophawu lwakho.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga nemiqondiso kunye noyilo, kwaye u-Otl Aicher usebenze njengesalathiso esilungileyo sokufunda kwakho kunye nempembelelo kuyilo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iimpawu kuyilo
Uyenza njani iPowerPoint yobungcali
Ziyintoni kwaye ungayifumana phi imizobo ye-3D